Oromoon eenyummaa ofii dhiisee waan biraatiif dursa hin kennu | freedomfororomo
Posted by Itana Guteta on June 30, 2013
Kan nama dinqu, namtichi Tedla Asfaw jedhamu kun barreeffama isaa keessatti waa hundaa kan isa xibaarsisu fi qabxii guddaa godhee keessaa cuunfee kan baase, Obboo Jawaar maaliif Oromoof dursa kennaa dha. Obboo Jawaar, Sabboonaa ilma Oromoo waan ta’eef, Oromoof dursa kennaas sochii musiliimota Itoophiyaa keessatti gahee guddaa taphachuu ni danda’a. Oromoof dursa kennuun sochii sana faallessuu miti. Sabboonaan kun akka jibbamu taasisuuf yoo ta’e malee, akkanatti dubbateef; dhugaa jiru himeef; wanti inni cunqurfamtoota Itophiyaatiif hin dubbanneef sababni hin jiru. Oromoo ta’eef, ani Oromoofan dursa kenna jedheef, carraa kamtu isa jalaa bade? Namtichi kun barreeffama isaa keessatti, “…Jaalalli inni (Jawaar) Oromoodhaaf qabu, akka inni sagalee musiliimota Itoophiyaa hin taane shakkii tokko malee kabaja isaa hir’isa…” jedha, Afaan Oromootti yoon hiikuu yaalu. Gaafiilee namtichi kun deebisuu qabu: Musiliimotni Itoophiyaa, akka Jawaar Oromoo ta’e hin beekne turanii? Moo Oromoofan dursa kenna waan jedheef, takkitumaan kabjini isaaf qaban hir’ata laata? Musiliimotni sun harki caalaan isaanii Oromoo mitii? Sababa kanaan yoo Jawaar jibban ofis jibbuu hin ta’uu?….
← Ethiopia After Meles Zenawi: Testimony of Donald Y. Yamamoto, Acting Assistant Secretary, Bureau of African Affairs [Press Release: US State Department]
Identity debt crisis, the case of Abe Tokichaw →
3 comments on “Oromoon eenyummaa ofii dhiisee waan biraatiif dursa hin kennu”
Waayyee Abuno on January 12, 2015 at 8:55 pm said:
QBO Galmaan gayuun fagoo miiti Ummaani Oromoo Hundaa Dura Tumsa QBOtiif akka goodhufi WBOn Gudiinale Oromiiyaa Cufa Keesatti Sochii akka Egaalu fi Bilisummaa dhigaa male hin argaamtu Wareegama Gootota Keenya firii itti Goodhuun Dirqaama Keenya Nagati
Waayyee Abuno on January 12, 2015 at 9:12 pm said:
Wareega qaalii lubbuun gootota meeqa dhabnee yaa ilmaan Oromoo maliif wali hin gaalle arrale Biyyaa to an siifan ciisaa dhabee harka tokkoon dina qabe Diina mataa lafa qabee halaalchii irraan tarkaanfadhu duraan dhiraan dhabee! Ahmad Taju Galamsoirra
Waayyee Abuno on July 2, 2015 at 8:07 am said:
QBOtiif Dammaqii ka’i lafa oromoon sii egaa maaf raftaa ilaa ammaa sii yaama ummani amma ammaa Kootta Bilisummaan dhigaan dhuftii marsaa waayyeene Galatoma